कथा कहाँ प्रकाशित गर्न?
आजकल, इन्टरनेट धेरै मान्छे को लागि जानकारी को प्राथमिक साधन छ। यो संचार को बस एक माध्यम, तर ऐनामा एक प्रकारको हाम्रो सम्पूर्ण जीवन प्रतिबिम्बित छ जो छैन। , इन्टरनेट मा एक प्रतिनिधि कार्यालय छ कुनै पनि संगठन को लागि गत दस वर्ष मात्र आवश्यक थियो भन्दा र पाठ्यक्रम, यी प्रक्रियाहरू बचाउनुभयो छैन र साहित्य। निस्सन्देह, धेरै कल्पना, कुनै पनि साहित्यिक गतिविधि जस्तै, परंपरागत यो छापिएको सामाग्री, पुस्तक तथा पत्रिकाहरू सम्बन्धित, तर हाल को वर्ष मा धेरै पुस्तकहरु पहिले नै विद्युतीय स्वरूप अनुवाद गरिएको छ, र सबै भन्दा पत्रिका र समाचार पत्र सामाजिक मा वेबसाइट वा एक पेज सञ्जालहरू। आधुनिक युवा लेखक, पहिलो पटक आफ्नो कहानी प्रकाशित गर्न कसरी प्रतिबिम्बित गर्न, र लगभग सधैं नेटवर्क मा यसको लागि सबैभन्दा उपयुक्त साइट खोज्न बाध्य।
यस्तो निर्णय गोद गरेर, उहाँले एक विकल्प सामना। उहाँले जहाँ एक कहानी वा यसको अन्य उत्पादन को कुनै पनि प्रकाशित गर्ने निर्णय हुनेछ? यो प्रश्नको जवाफ, यो त्यहाँ लेखकहरूले लागि साहित्यिक स्रोतहरू धेरै प्रकार हो भनेर व्याख्या गर्न पहिलो आवश्यक छ। पारंपरिक, तिनीहरूले सम्पादकीय Screener गर्न उत्पादन र मञ्चहरूमा मुक्त नियुक्ति संग साइट भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
हामी पहिलो तपाईं सबै comers प्रकाशित गर्न अनुमति दिन्छ थप बुझ्न ..., तर तिनीहरूले अक्सर केही "चासो को क्लब" छन्। यो हाम्रो दिनमा सम्भव बनेको नयाँ घटना छ। यहाँ नेताहरूले सायद हामी कल सक्छ र पोर्टल stihi.ru proza.ru छन्। उत्तरार्द्ध गर्दा मुद्रित प्रकाशनहरू analogous छन्। विभिन्न, साहित्यिक सामाजिक र कलात्मक अनलाइन पत्रिका, समाचार पत्र र anthologies। यो सबै भन्दा ठूलो विद्युतीय संस्करण हो जो भन्न गाह्रो छ। व्यक्तिगत, म प्रयोगकर्ता छोड्न भनेर समीक्षा को संख्या द्वारा निर्देशित छु। मेरो लागि यो पत्रिकाको "readability" को सूचक एक प्रकारको छ। तर, एक पत्रिका जवान लेखक कुनै एक बनाउँछ मा रोक्न, र यसैले यो धेरै पत्रिका को शब्द मा आफ्नो कथा पठाउन किन्न सक्छन्।
एक पत्र कसरी लेख्न र पत्रिका मा प्रकाशन को लागि आफ्नो काम प्रदान गर्न ठीक पहिले नै एक पटक भन्दा बढी वर्णन गरे। साथै, त्यहाँ सामान्यतया हरेक साहित्यिक पत्रिका मा यो मुद्दा समर्पित एक पृष्ठ हो। यसलाई "सम्पर्क" भनिन्छ हुन सक्छ, "लेखक" वा जे अरू। यसबाहेक, यो सम्पादक यसको आफ्नै दर्शक विस्तार मा रुचि रूपमा पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल मा प्रस्तुत छ कि छैन ध्यान गर्नुपर्छ। आखिर, पत्रिका समावेश छ भने, कम से कम केही हदसम्म, कि "विज्ञापन", जो दर्शक र यो धेरै ठूलो छैन र तपाईं जस्तै लेखकहरूले समावेश गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो भनिन्छ सकिएन। हो, साहित्य अक्सर मनपर्ने को धेरै, यद्यपि, आफ्नो लक्ष्य ", साहित्यिक सर्कलमा को pathos" को सामेल छैन र पाठक पाउन छ भने छ, तर, क्षण अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ।
Sami अनलाइन पत्रिका विरलै आफ्नो लेखक अनुपम चुनौतीहरू प्रस्तुत। अनपढ लिखित पाठ, धेरै उत्पादन it.d.: तिनीहरूलाई सामान्यतया banal कुराहरू घृणा उत्पन्न, प्रकाशन प्रकाशित छ के मा वा त्यो हेर्न र आफ्नो आकार मेल गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
तथापि, लेख समाप्त, शायद, यो राम्रो मूल प्रश्न फर्केर जान हुनेछ। कथा कहाँ प्रकाशित गर्न? म, कुनै कुरा यो कसरी corny सुनिन्छ, जो साहित्यिक पत्रिका लागि «खोज को पहिलो पृष्ठमा हो पत्रिका," एउटा कारण लागि हो भन्ने निष्कर्ष आए। युवा परियोजनाहरु आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मा आफ्नो प्रकाशनहरू र पोस्ट घोषणाहरू गर्न पूर्वावलोकन तस्वीर गर्न अल्छी छ संस्करण जो, सार्वजनिक, साहित्यिक पत्रिका "को निरर्थक को प्रतिबिम्ब" आवंटित गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि, पहिले उल्लेख, यो साहित्य आउँदा, जवान लेखक कुनै एक धेरै मुद्रण र इलेक्ट्रोनिक मिडिया गर्न कहानी पठाउन रोक्छ।
कुनै पनि मामला मा, प्रकाशन सधैं यो छ जब मुख्य मापदण्ड पाठ गुणस्तर छ। तपाईं आफ्नो क्षमता मा विश्वास गर्दै छन् भने, सबै अवसर प्रयोग विभिन्न प्रतियोगिताहरु भाग, र आफ्नो पहिलो प्रकाशन लामो लिएनन्।
अर्थ र "एक कुकुर को हृदय" को सारांश - कहानी विहीन छ
Pushkin "Dubrovsky": कहानी को एक सारांश
Zykov भिटाली लेखक: जीवनी, पुस्तकहरू
Multivarku कसरी चयन गर्न: केही सिफारिसहरू
पेन्सन "दक्षिणी" (सोची): को कोठा को वर्णन, सेवाहरू
कहाँ र कसरी व्यक्त स्तन दूध भण्डारण गर्न?
जलीयकृषि - दुई प्रमुख क्षेत्रमा: अलवण र समुद्री
जापानी मा कला: कसरी एनिमे आँखा आकर्षित गर्न?
विशेषताहरू पहुँच डेटाबेस नजिकै
आफ्नो घर मा जोकर माछा
को toning बाम के हो र यो कसरी काम गर्छ